The Ab Presents Nepal » आज फागुन १२ गते राशिअनुसारको तपाइको भाग्यफल !
आज फागुन १२ गते राशिअनुसारको तपाइको भाग्यफल !
आज मिति २०७६ साल फागुन महिनाको १२ गते सोमबार । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०२० फेब्ब्ररी २४ तारिख रहेको छ । मेष-तपाईंमा प्रशस्त ऊर्जा रहनेछ – तर कामको दबावले तपाईंलाई रिसाहा जस्तो बनाउँछ। अचल सम्पत्ति र वित्तीय कारोबारका लागि राम्रो दिन हो। परिवारका सदस्यहरूसँग केही तनाउमुक्त समय बिताउनुहोस्। तपाईंला आफ्नो प्रिय फोन गर्नेछन्, यसैले यो राम्रो दिन हो। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।
वृष-आज तपाईं आशाको जादू अन्तर्गत हुनुहुन्छ। प्रेम इन्द्रियहरूले पाउन सक्ने कुरा होइन, तर तपाईंका इन्द्रियहरूलाई आज प्रेमका परमानन्दको अनुभव हुनेछ। व्यवसायीको लागि राम्रो दिन। व्यापारको उद्देश्य लिएर अचानक गरिएको यात्राले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ। खुशीयाली यात्रा सन्तोषजनक हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडी आफ्ना साना मुद्दाहरूमा झगडा गर्नुहुनेछ तर यसले पछि गएर तपाईंको विवाह बर्बाद हुन सक्छ। अरूले भनेका वा सुझाव दिएका कुरामा भरोसा नगर्नुहोस्।
मिथुन-तपाईंले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरू अत्यधिक माग गर्ने पाउनुहुनेछ – तपाईंले गर्न सक्ने भन्दा बढीको प्रतिज्ञा नगर्नुहोस् – र अरूलाई खुसी पार्नको लागि आफुलाई गलाउन जोड नदिनुहोस्। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। अधिनस्थ वा सह-कार्यकर्ता अत्यधिक सहयोगी हुनेछन्।
कर्कट -बच्चाहरु तपाईँको अनुसार काम गर्दैनन् – जसले तपाईंलाई उन्मादमा पार्न सक्छ। तपाईंले आफैंलाई सहनशील बनाउनु पर्नेछ किनकि अनियन्त्रित रिसले सामान्यतया सबैलाई र विशेष गरेर क्रोधी व्यक्तिलाई प्रहार गर्दछ र यसले आफ्नो ऊर्जाको नोक्सान हुन्छ र न्याय संकाय घट्दछ। यसले मात्र कार्यहरूलाई गाह्रो बनाउँछ। परिवारका सदस्यहरूसँग मतभेदमा विजयी भएर – तपाईं सजिलै आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नु हुनेछ। विवाहको प्रस्ताव हुनाले तपाईंको प्रेमी जीवन जीवनको लामो बन्धनमा परिणत हुन सक्छ।
शिंह-असम्भवको लागि अनावश्यक सोचाइमा आफ्नो ऊर्जा बर्बाद नगर्नुहोस्, बरु यसलाई सही दिशामा प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। परिवारमा स्वास्थ्यको समस्या भएका कारणले पहिले बनाएका यात्रा कार्यक्रमहरू सर्न सक्छन्। मित्रता गहिरो हुँदै गएपछि रोमान्स आफैं त्यहाँ आउँछ। तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताले धेरै प्रशंसा ल्याउनेछ। कठिन समयमा आफ्ना जीवनसाथीबाट सहायताको कमीले तपाईंमा निराशा आउनेछ।
कन्या -आनन्दले भरिएको राम्रो दिन। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। निर्णयको बाटामा गर्वलाई आउन नदिनुहोस्। अधिनस्थहरूले भनेको पनि सुन्नुहोस्। आज तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै राम्रो खाना वा पेय लिनु हुनेछ, जसले स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ।
तुला-विनोदी आफन्तहरूको साथ पाएपछि तपाईंको तनाउ कम हुनेछ र तपाईंलाई धेरै आवश्यक परेको राहत पाउनुहुनेछ। तपाईं यस्ता आफन्तहरू पाएर भाग्यमानी हुनुहुन्छ। तपाईंको घरेलू दृश्य केहि अप्रत्याशित हुनेछ। रायको भिन्नताले व्यक्तिगत सम्बन्ध तोडिन सक्छ। तपाईं काममा जोड दिने हुनुहुन्छ भने रीस उठ्नेछ – तपाईंले कुनै पनि निर्णय लिनु अघि अरूको आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफन्तहरूले आज तपाईंको जोडीसित तर्क गर्न सक्छन्।
वृश्चिक-घरको तनाउले तपाईं क्रोधित बनाउन सक्छ। तिनीहरूलाई दबाउनाले मात्र शारीरिक समस्या बढाउँछ। शारीरिक गतिविधिले यसलाई हटाउनुहोस्। रिसाले अवस्था छोड्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस् – तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। तपाईं आज उपस्थित भएको समारोहमा नयाँ मित्रता विकास हुनेछ।
धनु-धेर नखानुहोस् र तन्दुरूस्त हुनको लागि नियमित रूपमा स्वास्थ्य क्लब जानुहोस्। तपाईंले आज आफ्नो घर र घरको वरिपरि केही प्रमुख परिवर्तन गर्ने धेरै सम्भावना छ। तपाईंले धेरै नै प्रेम गरेको व्यक्ति प्रति तपाईंको रूखो व्यवहारले सम्बन्धमा सामंजस्यता ल्याउन सक्दैन। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई आफ्नो नराम्रो पक्ष देखाउन सक्छ।
मकर-घर बाहिरका गतिविधिहरु आज गलाउने र तनाउपूर्ण हुनेछन्। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। तपाईंका आमाबाबुको स्वास्थ्यका लागि अतिरिक्त ध्यान र हेरविचार आवश्यक छ। तपाईंले आज आफ्नो प्यारो प्रेम जीवनमा स्वादिष्ट मसलाको स्वाद पाउनु हुनेछ। तपाईंका वरिपरि मानिसहरूलाई धेरै प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न तपाईं शक्तिशाली स्थितिमा हुनु हुनेछ। आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
कुंभ-तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधार गर्ने कामहरूको लागि प्रशस्त समय हुनेछ। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। तपाईंले प्रियजनहरूसँग तर्क हुन सक्ने विवादास्पद मुद्दाहरू ननिकाल्नुहोस्। आज तपाईंको आत्मीय भएर जोडिने अनुरोध गर्ने कसैसँग भेट हुने बलियो सम्भावना छ। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसँग जीवनको सबैभन्दा राम्रो साँझ बिताउन पाउनु हुनेछ।
मीन- बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। तपाईंले वित्तीय लाभ हुने शानदार नयाँ विचार गर्नु हुनेछ। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। आज तपाईंको आत्मीय भएर जोडिने अनुरोध गर्ने कसैसँग भेट हुने बलियो सम्भावना छ। तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने – तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ।